बिदेशमा बस्ने महिलाहरुका श्रीमान कति सहयोगी?
शिक्षित र आफु जिम्मेवार भै सकेका जोडीले योजनाबद्द तरिकाले नै सन्तान जन्माउने निर्णय लिने गर्नाले आजकाल गर्भवती महिला र नवजात शिशुको हेरचाहमा धेरै सुधार आउन थालेको छ। हाम्रा बुबा हजुरबुबा हरुले गर्भवती अवस्थामा आमा र हजुरआमा लाई गर्ने हेरचाह लगायतका व्यवहार र अहिलेका पुरुष हरुले गर्ने व्यवहार मा धेरै भिन्नता पाईन्छ।
भानु दुङ्गाना - बातेछन् यहाँ प्रबातेपनि, सन्तान उस्तै भए नौलो ज्ञान प्रज्ञानको सुरकला,आशा दुराशा भए । ट्याउँ ट्याउँ मात्र सधै, छ ट्याउँ अझ तक के ज्ञान, के बिज्ञान तक थ्यो बर्ष बर्षाै अघि वक वातले दुनियाँ, छ उहि गतिमा, उस्तै छ गति चाल त्यै झुपडीकै कुन देश...
यसरी कसियो जनसम्पर्क समिती अमेरिकाको गांठो
गोकुल ढकाल -
र्खादेखी अंशको भगवन्डामा लफाडा निकालीरहने 'कांग्रेसी रोग' को जराले गांजेको नेपाली जनसम्पर्क समिती, अमेरिकाको भनिएको 'विवाद'को याद गर्ने मौसम बन्यो त्यहां। शेराटन होटेलको पानी र कफीमा के हाल्यारहेछ कुन्नी! 'ताई न तुईको विवाद भयो यार, दुनियाँको हांसो, अनाहकको पासो' भन्दै नेजस, केन्द्रिय समितिका उपस्थित कारीब १९२० जनाको समुहमा एउटा 'समाधानको भूत' जगायो।
अमेरिकामा हाम्रो इमानको मूल्य कति?
​बाल जोशी -
' इमानको मूल्य' प्रश्नको जबाफ दिने दोस्रो पक्ष हो- हामी सँग मत माग्नेहरू - अथार्त चुनावका प्रतिस्पर्धीहरू। हजारौँ सदस्यहरूको मत किनेर चोरी बाटो संस्थाको नेतृत्वमा पुग्ने अभिलाषा भएकाहरुलाई मेरो प्रश्न छ - के जित्नु मात्र ठुलो हो ? के त्यो प्रक्रियामा तिमीले हिडेको बाटोको कुनै महत्त्व छैन ? के 'साम, दाम, दण्ड ,फेद' ले तिमीलाई आफ्नो इमान समेत बेच्न सिकाउछ र ? सफलता पाई सके पछि त्यो यात्राको सङ्घर्षका बारेमा 'फ्ल्यास ब्याक' गर्दा तिमीलाई गर्व गर्न मन नलाग्ला र ? अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न के भने - सेवा गर्न कै लागी येत्रो विधि झगडा के को लागी ?
बिनम्र बिरोध गर्ने संस्कार सुरु गरौँ
प्रधुम्न रेग्मी -
कुनै पनि राष्ट्र को सर्बोपरि व्यवस्था को लागि राजनैतिक दलको पक्कै अहम भूमिका हुन्छ तर हामीले मनन गर्नु पर्ने कुरा भनेको नेता पनि हामि माझबाट आउने हून। राम्रो संस्कार बसाल्दै गए त्यहाँ बाट निस्कने नेता पनि राम्रै हुन्छन। हाम्रो यो भनसुन, चाकडी, पद्लुलुप्ता र नाताबाद को जालो समाज मा जसरि जरो हालेर बसेको छ त्यसको अन्त गर्न गाह्रो पक्कै छ तर असम्भव पक्कै छैन।
'भेलाईन्टाईन डे' मनाउने हो? टिप्स थाहा पाउनुस्
भेलाईन्टाईन डे लाई प्रेमी प्रेमीकाले मात्र मनाउने हो भन्ने बुझाई गलत हो। यदी तपाई सँग प्रेमी वा प्रेमीका छैन भने पनि यस दिन लाई मनाउन सक्नु हुन्छ। यो भेलाईइन्टाइन डे महँगो दिवस भयो भन्ने तपाई लाई लाग्छ भने यस दिन लाई अरु ले झै तडक भडक का साथ मनाउनु पर्छ भन्ने छैन।
प्रतिस्पर्धी मध्ये राम्रो खोजेर आइजीपी छान्ने कि हाम्रो खोजेर?
अहिले आइजीपी छनोटको सम्वन्धमा विश्वसनीय र लोकप्रिय संचार माध्यमहरुमा जे जस्ता सामाचार आइरहेका छन त्यसले एक्काइसौँ शताव्दीको नेपालमा पनि सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयसंग जिम्मेवार संगठनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तीको चयन योग्यता, क्षमताको आधारमा हैन शक्तीकेन्द्रमा रहेकाहरुसंगको क्षेत्रिय निकटताको आधारमा गर्न खोजिदै छ रेl
पानी अभियान कसरी शुरु भो?
मित्रलाल पार्दे -
नुहाउन पनि घण्टौ हिंडेर कहिले घोराही पुग्नु पर्यो त कहिले अंबापुर फुपुको घरमा पुग्नु पर्यो, कहिले देउखुरीको रापती नदिमा पुग्नु पर्यो। कहिले कालिमाटी, कहिले रामपुर गाउँमा कहिले कटुवा खोला, कहिले सिस्ने खोला पुग्नुर्पयो।
लाप्राक हामी प्रवासीसँग जोडिएको स्वाभिमान हो
भवन भट्ट -
एनआरएनको गुरुयोजना अनुसार पाँच सय ७३ वटा घरको निमार्ण गरी नमूना बस्ती बनाइने छ र त्यहाँ लाप्राकका भूकम्प पीडितहरुलाई पुनर्बास गराइने छ। एकीकृत वस्तीमा बन्ने संग्रहालयमा पानी घट्ट, जाँतो, ढिकी, लाइभ प्रोग्राम देखाउन मिल्ने हल, परम्परागत बस्तु र संस्कारबारे सामग्री, मन्दिर, देवल पनि हुनेछन्। साथै सोलार इनर्जी, अपांगमैत्री संरचना बन्नेछन।
एन्आरएन् अमेरिकाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन्?
रबिन राज बज्राचार्य -
सन् २०१५ को एन्आरएन चुनाव को नतिजा प्रकाशित गरे लगत्तै हामी न्याय प्रेमी सदस्यहरुले चुनावी विबरण पारदर्शी रुपमा हेर्न पाउनु पर्छ भन्ने निवेदन तत्कालिन कार्यसमिति र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थियौं। जुनसुकै संस्था र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा निर्वाचन परिणाम माथी शंका भएको अवस्थामा मतको पुनर्गणना गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। हालैको अमेरिकि निर्वाचन पश्चात पनि केहि राज्यहरुमा पुनर्गणना गर्नकालागी निवेदन दिइएकै हो।
दलाललाई ११ लाख बुझाएर यसरी पुगियो स्वीट्‌जरल्याण्ड
लेखबहादुर बिश्वकर्मा -
पालुङ्गटार बैठकमा मंच, बैठक आयोजना गर्न हरेक दिन श्रम गर्न जाने मान्छे हुँ म। पार्टीले बन्दुक चलाउन सिकायो । त्यसपछि मेरो काम खबर आदान प्रदान गर्नु थियो। बाँसका खांबा गाड्ने, मंच बनाउने लगायत सबै काम गरियो। गुणराज देवकोटा, राममणि धितालले धाप पनि मारे। बोर्ड फर्स्ट बाबुराम भट्टराईले पढेको स्कूलमा पढे पनि पढ्न आएन। बिहान साढे नौ सम्म आरनको काम गरेर स्कूल जाँदा अक्सर म आरनको रापले होला पहिलो कक्षामा झुपुक झुपुक निदाउँथें।
अरब भासिएको छोरोलाई पर्खि वसेको गाँउ
डा किशोर सापकोटा -
अरवको खाडीमा वानी परेको अमनलाई फागुनको महिना भए पनि काठमान्डौ यरपोर्ट झर्नासाथ जाडो लाग्न थाल्यो। ज्याकेटको टोपीले टाउको छोप्दै काठमान्डौवाट सिधै जिल्ला जानी वस चढ्यो। जहिले पनि घर आँउछु यो साल भनेर घरमा भन्थ्यो, तर जाने वेलामा विदा नमिल्ने, अनि घरमा अहिले पनि आएन भनेर चिन्ता गर्ने।
अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता संविधानको कार्यान्वयन
श्रीप्रसाद तीम्सीना -
वर्तमान प्रधानमन्त्री जहिले जे लहड आउँछ त्यही बोल्छन्। उनलाई जनयुद्ध चलाउनु र सरकार चलाउनु उस्तैउस्तै लाग्दो हो ! जनयुद्धमा बैंक लुट्ता, प्रहरी मार्दा , गाविस जलाउँदा ,आफूसित मत नमिल्ने व्यक्तिको हत्या गर्दा पनि अहिले प्रधानमन्त्री हुन पाएका छन् भने अब त कसले के गर्न सक्छ र ?प्रहरी र सेनाले सलाम ठोक्नुपर्ने मान्छे उनै हुन् ! प्रतिपक्षलाई वाईसीएल लगाएर बदला लिन्छु भन्न थालिसके ! प्रधानमन्त्री नै यस्ता अनर्गल प्रलाप गर्छन् भने देशले सही मार्ग कसरी समात्ला? सबैलाई समेटेर देश चलाउने जिम्मा लिएका प्रमुख व्यक्ति कहिले प्रधानमन्त्रीकै पदमा बसेर ' क्रान्ति गर्छु ' भन्दै बर्बराउँछन् !
अनि मैले सोचे 'एक पटक म पनि अमेरिका जान पाउँ'
बिजय शर्मा दर्पण -
गाउँबाट भर्खर सहरमा पसेको म त्यो काठमाडौँ सहर एकदम नयाँ अनि नौलो लाग्थ्यो। त्यहि पनि रमाइलो लाग्थ्यो। आनन्द लाग्थ्यो। एक दिन, साथीहरु अमेरिकाको लागि डिभी भर्दै थिए। सुनें, अमेरिका संसारको शक्तिशाली राष्ट्र हो रे! मलाई पनि लाग्यो, मर्नु अघि एक पटक अमेरिका देख्न पाईयोस। केहि साथीहरु डिभी परेर उडे अमेरिका तिर। प्लेन चढेर। त्यहीं आकाशमा उड्ने प्लेन चढेर। चरा जस्तै। मलाई पनि लाग्यो, सपनाहरु पनि पुरा हुन सक्दा रै छन्।
आफ्नो देशको भन्दा अमेरिकाको बढी चिन्ता छ हामीलाइ!
मनोज कार्की -
अमेरिकन नागरिकहरुलाइ भन्दा बढी चिन्ता नेपालीहरुलाइ अमेरिकाको छ। अहिले सामाजिक सजाल देखि अमेरिकामा भएका आफन्तीहरुलाइ सोध्नेहरुका प्रश्नहरुलाइ बिचार गर्ने हो भने अमेरिकाको चिन्ता अमेरिकाकै राष्ट्रपतिलाइ भन्दा बढी नेपालमा भएका नेपालीहरुलाइ पो छ कि जस्तो अनुभव हुन्छ बेलाबेला मलाइ।
जव रुलेट, किट्टी कुनै पनि टेवल माइनसमा जान्छ त्यसवेला भने कुनै कुनै हाकिमहरूले मलाई अन्तिम अस्त्र बनाएर डील गर्न लगाउँथे। नभन्दै मलाई किट्टीको टेवलमा डिल गर्न बोलाइयो। किनभने म त्यहाँ डिलर थिएँ। नभन्दै मैले किट्टी खेलाउन थाले पछि भकाभक क्यासिनोले जित्न थाल्यो। वास्तवमा क्यासिनोले हार्दै गर्दा गर्ने भनेको पनि डिलर चेन्ज,कार्ड चेन्ज र गोटि चेन्ज मात्रै हो। धेरै जसो क्यासिनोले डिलरकै लकलाई विश्वास मान्छ र चेन्ज गर्छ।
आलोचना सहन नसक्ने एन आर एनले कसरी हाँक्न सक्छ समाज?
समाजमा नेपालीहरुको हकहितमा यसो गर्छौं र उसो गर्नेछौं, गर्दै छौं भनेर प्रचार प्रसार गरिएको हुन्छ। काम गरेकालेपनि त्यस्तो प्रचार गर्छन्। नगरेकाले पनि जिन्दगिमा नै समाजको लागि पहिलो पटक यो संस्थामा लागिपरेका पनि हुन्छन। आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न, मतदातालाई प्रभाव पार्न आफ्नो आफ्नो मीडियाबाट यसलाई राम्रैसँग उचालेर कभरेज गरेका हुन्छन। त्यति मात्रै हो र\_? उनिहरु यो बिषयलाई आधार बनाउँदै फेसबुक लाइक र वेबसाइट भिजिट राम्रैसँग बढाउने चक्करमा हुन्छन्
फेसबुकमा मात्र सिमित स्वीटजरल्याण्डको ५ बर्षे हाँसो
बिजय शर्मा दर्पण - सबै लाइ अबगत भएकै कुरा हो, आफ्नो भोगाई र अरुको देखाईमा अलि भिन्नता हुदों रैछ। मान्छेहरु दुख लुकाएर भएपनि हाँस्न सिपालु हुदैछन, भैरहेका पनि छन्। जसले जति राम्रो देखायो, अरुलाई जति जलाउन सक्यो जतिले इर्श्या गर्ने हुन् अझ त्यसलाई बढावा दिन सक्यो त...
नर्वेली ऊर्जाको कर्जामा नेपाल
टेक बहादुर गिरी -
यो चिसो देशका न्यानो मुटु भएका धेरै नर्वेलीले आइपरेको बेला नेपालको पक्षमा नर्वेली संसददेखि सडकसम्म अभियान नै सञ्चालन गरेका त्यस्ता धेरै भावनात्मक सन्दर्भहरु पनि छन्। नेपाललाई निरन्तर दिएको यो ऊर्जा र गुणको कर्जा हामी कसरी सुलाउन सक्छौं?
मरेर बाचेको एक दिन
डिठ्ठाले चिया को चुस्की लिदै मेरो जिज्ञासामा भने 'खै बाबु, ज्योतिषी ले शनिबार यात्रा नगर्नु भनेका थिए त्यसैले हिजो शुक्रबार राती नै यहाँ बास बस्न आएको थिए'। डिठ्ठा साहेबले शनिबार हामि सग जान पटक पटक आनेकानी गरेको कुरो यस्तो पो रहेछ। डिठ्ठा साहेब घर बाट कतै जानु पर्‍यो भने साईत जुराएर मात्र जाने गर्नु हुदो रहेछ। यसरी साईत जुराएर घर बाट हिडने परम्पराबादीहरु धेरै लाई देखेको थिए, मलाई डिठ्ठाको यस बानीमा कुनै आस्चर्य लागेन।
तिमीले जे गर्यौ ठिक गर्यौ
नेपाल जानु पहिला भएका हरेक भेटघाट निकै अर्थपुर्ण थिए। कुराकानी हामी वीचको भएपनि उनले नेपाल फर्कने चाहाना राख्ने नेपाली युवाहरुको स्वदेशप्रतिको लगावलाई प्रतिनिधीत्व गरेका थिए। एक दशक लामो पत्रकारिता गरेका गिरी दोस्रो पटक युरोप आएर नेपाल फर्केका हुन्।
नश्लीय राष्ट्रवादको गाईजात्रा
वीरेन्द्र कटुवाल -
नेपालको राजनीतिक इतिहासले राष्ट्रियताको मर्म र भावनालाई साह्रै कम्जोर बनायो। एउटा उपभोग्य वस्तु सरह। नश्लीय राष्ट्रवादको अहंकारबाट बाहिर नआउँने हो भने, यसले सबैलाई कम्जोर बनाउँछ अनन्त कालसम्म। मुलुक र राष्ट्र दुवैलाई। यसर्थ यो स्वीकार गर्न हिचकिच्याउनु हुन्न कि एउटा निश्चित नश्लीय समुदायले सत्तामा आफ्नो परम्परागत वर्सच्व कायम राख्नको निमित्त राष्ट्रियतालाई सँधैभरि साधन बनाइराख्नु हुँदैन। र, राष्ट्रियतालाई सबै राष्ट्रलाई एउटै नेपाली राष्ट्रियताको शुत्रमा बाँध्नसक्ने साध्य बनाउँन आवश्यकछ।
घर छोडेर भागेको दिन
नौ वर्षको कलिलो उमेर, जुम्लाको चिसो साँझमा नदी तर्नुपर्ने। दुवै जनाको शरीरमा मैलो र झुत्रो एकसरो कपडा मात्र। नदी तर्दा कपडा भिज्छ भन्ने हाम्रो दिमागमा आएन। दुवै जनाले निलो रंगको तिला नदीलाई एकनासले हेर्‍यौं। बगाउँछ होला नदी ठूलो छ! उसले अनुहारमा देखाएको डरलाई छोप्न मैले हौशला थपेँ-बग्दै गए पनि तलसम्म त पारी कसो नउत्रिएला। उसले पनि भन्यो- मरे मरिन्छ, हिड् जाम। विस्तृतमा
साउको ऋण शिरमै राखेर देश फर्कने कसरी कल्पना गरू म?
जनक बराल -
तपाइँ पत्रकार, देख्नु नै भयो होला, पोर्तुगल आउन लाइ १८ लाख खर्च गरेर टर्की सम्म जहाज अनि त्यहा बाट ज्यान हत्केलामा राखेर २९ दिन सम्म पैदल हिडेर ११ ओटा देश को बाटो हुदै रातो पासपोर्टको आशामा पोर्तुगल आएका साथिहरु। सय कडा ३ मा १४ लाख ऋण गरेर २ बर्ष दलालको पछि लागेर पोर्तुगल आउँदा पनि १ बर्ष सम्म सेगुरान्सा नबनेर मार्तेमुनिजमा टोलाएको नेपाली साथिहरुलाइ घर फर्क कसरी भन्ने होला?
बिदेशमा बेइज्जत गर्ने राजनीतिकदलका भातृसगठन
बेल्जियम , सन्तोष न्यौपाने -
ब्रुज सहरमा सम्पन्न बैठकमा पनि अहिलेका अध्यक्ष सन्तोष जोशीले 'पाका' भनिनेहरुको कार्यशैलीको कारण संगठनको अस्तित्व बचाउन कठिन हुने बताएका थिए। उनले आउने अधिबेसनमा सहमतिको प्रयास जारि रहने दाबि गरेका छन्। कार्यकर्ममा जन सम्पर्क समिति बेल्जियमको साधारण सदस्य वितवरण अरु पार्टी समर्थकहरुलाई बाडिरहेको खुलासा गरिएको थियो। जसमा एकपक्षले छानबिन गरेर ति ब्यक्तिहरुलाई सदस्य बाट निस्कासित गर्नुपर्ने बताएको थियो भने अर्को पक्ष स्वस्फुर्त रुपमा आउनेहरुलाई रोक्न नहुने बताउँदै आएको थियो।
बिश्वराजनीतिबाट नेपालले केहि सिक्नु पर्दैन?
लोकनाथ अधिकारी -
दाताको रूपमा हामीले हेरेका पश्चिमाहरू र तिनीहरूमा पनि खोट छ। धार्मिक अतिक्रमणकारीहरू र जाशुसीहरू अरबौँको पोको लिएर काठमांडूका तारे होटलहरूमा शेमिनार गर्छन्। पार्टीहरूलाई चन्दा दिन्छन् र भिशा स्पोन्सर गर्छन् हाम्रा नेताहरूलाई।
तेरिया नानी !१२५ करोड भारतीहरुलाई सिकाएर आयौ होइन
डा. मुक्ति अर्याल -
डान्स गर्ने यसरी
कम्मर मर्काउने यसरी
भनेर १२५ करोड भारतीहरुलाई सिकाएर आयौ, हैन ?
हाँस्यखेति, छक्का-पन्जा र कपिराइट
यम घिमिरे -
छोरीलाई तेक्वान्दो कक्षामा लाँदा त्यहाँ १५/२० नेपाली महिला पुरुष भेला भएर गफ गरी बसिबियाँलो गरिन्छ बच्चाको कक्षा चलुन्जेल। क्यानडामा यसरी भेलाहुने नेपाली समूहमा नेपालका विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स गरिसकेका र यता पनि आएर यहाँका कलेज विश्वविद्यालयमा केही न केही पढेका मान्छे नै हुन्छन् प्रायजसो। अर्थात्, जे आयो मजाले पचाउने हाजमोला जस्ता चत्रित्रका हुँदैनन् यो लेभलका मान्छे।
केहि नगरेजस्तो देखिएपनि धेरै गरेको छ एनआरएन अमेरिकाले
सर्वज्ञ वाग्ले -
विवाद जहाँ पनि हुन्छ। तिनै विवादहरुका कारण एनआरएन अमेरिकाले केहि काम नगरेजस्तो देखिए पनि कुनै कामै नगरेको भने छैन। हाम्रा लागी गरिनै पर्ने कामहरु धेरै गरेको छ भन्ने कुरालाइ सारमा देखाउन सफल भयो गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाको पाँचौ वार्षिक साधारण सभाले।
विदेशमा हुर्किदै गरेका आफ्ना सन्तानबाट तपाईं के अपेक्षा गर्नु हुन्छ?
हामी त्यही परम्परा र संस्कारबाट पालित पोषित छौं जहाँ आफ्ना सन्तानलाई बुढेसकालको साहाराको उपमा दिइन्छ। हुनत हाम्रो संस्कृति र परम्पराको जग कुनै नराम्रो भावनाले प्रतिपादित भएको थिएन होला र त्यही परम्पराले कतिपयको जीवन्स्तर राम्रो बनेको छ र बन्ने पनि छ। तर पनि समय परिवर्तन संगै परिवर्तित हुने व्यवहार, चालचलन र रितिरिवाज संगै आफुलाई पनि परिमार्जन गर्न सकिएन भने परिवर्तित समाजको रुप रेखा अपाच्य हुन सक्छ।